Amadili amahle kakhulu we-Black Friday 2019 ku-Amazon | Izindaba zamagajethi
Namuhla, ngoNovemba 29, iBlack Friday iqala ngokusemthethweni, olunye lwezinsuku ezilindelwe iningi lethu futhi ezisivumelayo gcina imali eningi ngokuthenga kukaKhisimusi. Besithumela ezinye zezipesheli ezihamba phambili izinsuku ezimbalwa. Namuhla usuku lokugcina ukusizakala ngakho konke ukunikezwa i-Amazon esinikeza kona.
I-Amazon, umgqugquzeli ophambili we-Black Friday ngaphandle kwase-United States, akafuni ukuphuthelwa yithuba futhi useqalile ukusinikeza inqwaba yezipesheli, okunikezwayo esingakuthola kuma-Smartphones, kumathelevishini, kuma-laptops, kumakhompyutha ... amadili amahle ngeBlack Friday 2019.
[KUVUSELELWE: 29-11-2019 15:30]
I-Amazon iyasivumela khokhela ukuthenga ngezitolimende ezi-4 zenyanga, okuzosivumela ukuthi sithenge imali enkulu futhi sikwazi ukuyikhokha ngokunethezeka kuzinkokhelo ezine zenyanga.
Lolu hlobo lwezezimali luyatholakala ngamanani kusuka kuma-75 kuya kuma-1000 euros futhi ingaphansi kokuvunywa yi-Cofidis. Uma umkhiqizo utholakalela ukuxhaswa ngezimali, lokhu kuzoboniswa eceleni kwentengo yokugcina yomkhiqizo.
1 I-Amazon Music Unlimited
2 Uhlobo olungenamkhawulo
3 Izipikha ezihlakaniphile ze-Amazon
4 Amadili kuma-Smartphones
6 Amadili wethebhulethi
7 Isithombe nomsindo
8 Amakhompyutha nama-laptops
9 Abaqaphi bekhompyutha nezinsiza
10 smart amawashi
11 Imikhiqizo yokuzenzakalela kwasekhaya nasekhaya
I-Amazon Music Unlimited
Abafana e-Amazon basinikeza izinyanga ezine zensiza yomculo yokusakaza I-Amazon Music Unlimited ngama-euro angu-0,99 kuphela, iphromoshini esingenakuphuthelwa yiyo. Isevisi yomculo yokusakaza ye-Amazon isinikeza ikhathalogi efanayo naleyo esingayithola kuzo zombili i-Spotify ne-Apple Music.
Kepha uma into yethu kungewona umculo, kepha kufundwa, singazama ngama-euro angama-0 kuphela nezinyanga ezintathu, isevisi yencwadi yama-Amazon Kindle Unlimited, isevisi ebeka ezandleni zethu izihloko ezingaphezu kwezigidi eziyi-1 esingazilanda futhi sizifunde noma nini nanoma ikuphi lapho sifuna khona.
I-Echo Bonisa i-5, isipikha esihlakaniphile esinesikrini esimnyama siyatholakala I-49,99 euro. Intengo yayo ejwayelekile ngama-euro angu-89,99.
I-iPhone 11 ene-64GB isitoreji, singakuthola ku-Amazon ye I-763,62 euro. Intengo yayo ejwayelekile ku-App Store ngama-euro angama-809.
I-iPhone 11 ene-128GB yesitoreji, ibuye ithengiswe kuphela 827,67 I-806 euro, Ama-euro angama-45 ngaphansi kwentengo etholakala ku-Apple Store.
I-iPhone 11 Pro 64GB, itholakalela i-just I-1111 euro, Ama-euro angama-80 eshibhile kunase-Apple Store.
I-iPhone 11 Pro 256GB, itholakalela i-just I-1233 euro, Ama-euro angama-60 eshibhile kunase-Apple Store.
I-iPhone XR nge-64GB yesitoreji etholakalela i- I-699 euro. Intengo yayo ku-Apple Store ingama-euro angama-709.
Samsung Galaxy S10, Imodeli engu-6,1-intshi etholakalayo ye- I-649 euro.
I-Samsung Galaxy S10 + Amasentimitha angu-6,4 no-128 GB wesitoreji atholakalayo I-729 euro
El Xiaomi Mi 9T Inesikrini se-AMOLED esingu-6,39-intshi ngaphandle kokutholwa ngaphambili, ngoba ikhamera itholakala phezulu kohlobo lwedivayisi ngendlela ye-pop-up. Ngemuva sinamakhamera ama-3 ka-48, 13 no-8 mpx ngokulandelana. Ine-chip ye-NFC, ibhethri elingu-4000 mAh, i-6 GB ye-RAM ne-64 GB yokugcina. Intengo: Ama-euro angama-291.
El I-Xiaomi Black Shark 2 Pro, iyatholakala ku-Amazon ye 699 I-649 euro, i-smartphone ene-12 GB ye-RAM, isitoreji esingu-256 GB, iprosesa le-Snapdragon 855 Plus, i-SIM ekabili kanye nesikrini esingu-6,39-intshi.
Ayikho imikhiqizo etholakele., i-terminal enesikrini esingu-5,99-intshi, i-6 GB ye-RAM ne-64 GB yesitoreji, zonke ziphethwe yiQualcomm's Snapdragon 845. Itholakala kuphela I-299 euro.
I-Motorola E6 Plus, nge-32 GB yokugcina kanye ne-2 GB ye-RAM yama-euro angama-109.
I-Motorola G7 Plus Play, Isikrini esingu-5,7-intshi, i-SIM ekabili yama-euro angama-119.
I-OnePlus 6, i-smartphone enama-intshi angu-6,28 wesikrini se-AMOLED, ene-8 GB ye-RAM neprosesa yeQualcomm Snapdragon 845 etholakalayo 349 329 I-309 euro.
I-OnePlus 6T, inikwe amandla yi-Qualcomm's Snapdragon 845 futhi ihambisana ne-8GB ye-RAM ne-128GB yesitoreji, iyatholakala ku-Amazon 419 I-409 euro.
I-Realme X2 Pro - I-smartphone engu-6,5-intshi SuperAMOLED ene-12 GB ye-RAM ne-256 GB yokugcina, iprosesa eyi-8-core nebhethri elikhulu le-4.000 mAh. Itholakalela i- 499 I-449 euro.
Isilawuli Esingenantambo se-Xbox One por I-41,99 euro.
Xbox One S + 1 isilawuli + Gear 5 umdlalo ngamunye I-189,90 euro. Ngamanani afanayo, singathenga i-Xbox One S esikhundleni seGear 5 enePUBG, i-Star Wars Jedi: I-Fallen Order, iBettefield V noma iDivision 2.
Okunye ukunikezwa okuthokozisayo kokuthenga Xbox One S Ngemali encane, siyithola ephaketheni elibandakanya i-Fortnite, i-Sea of ​​the Thieves ne-Minecaft, zonke zikufomethi yedijithali. Intengo: I-129 euro.
I-Xbox One X 1 TB + 1 isilawuli + Iqoqo leMetro Eksodusi le- I-320 euro. Njenge-Xbox One S, singathola amaphakethe ahlukile okuthi esikhundleni somdlalo weMetro Exodus Collection, basinikeze ezinye izihloko ezifana ne-PUBG, Division 2, Star Wars Jedi: Fallen Order noma amaGiya 5.
Ngenkathi i-Amazon ilungele ukuthenga ama-Microsoft Xbox consoles, Akukona nhlobo ukuthenga i-PlayStation 4 kuzinguqulo zayo ezimbili noma ama-Nintendo consoles.
I-iPad 2019 Nge-128GB yesitoreji nesikrini esingu-9,7-intshi, siyatholakala I-472 euro Ama-Amazon.
El Ayikho imikhiqizo etholakele. iyatholakala nge- I-74,99 euro nge-4 GB yesitoreji. Intengo yayo ejwayelekile ngama-euro angu-89,99.
AirPods isizukulwane sesibili esinecala lokushaja okungenantambo ngu I-179 euro. Intengo yayo ku-App Store ingama-euro angama-229.
Isethi ye-TV I-Samsung 4K UHD Amasentimitha angama-49 ane-HDR futhi iyahambisana ne-Alexa. 2019 imodeli ngu 599 I-569 euro.
Isethi ye-TV I-LG 65-intshi 4K UHD, I-HDR iyahambisana ne-Alexa ne-Google Assistant ngo 779 I-749 euro.
Isethi ye-TV I-LG 55-intshi 4K UHD, I-HDR iyahambisana ne-Alexa ne-Google Assistant ngo 579 569 I-539 euro.
Isethi ye-TV Cijela i-55K UHD engama-intshi angu-4 por I-499 euro.
I-laptop ye-MSI Prestige 15,6 intshi, I-Intel Core i7, i-16 GB ye-RAM, i-1 TB yesitoreji se-SSD, ihluzo ze-GTX 1650 4GB ngaphandle kwesistimu yokusebenza nge I-1.275 euro.
I-Acer Nitro 5 15,6 inch laptop, ngeprosesa ye-Intel Core i7, i-8 GB ye-RAM, i-1 TB HHD ne-128 GB SSD, ihluzo ze-Nvidia GTX 1650 4 GB nge Windows 10 uhlelo olusebenzayo lwasekhaya ngo I-849 euro.
Microsoft Surface Pro 6, Engu-12,3-intshi eguquguqukayo eneprosesa ye-Intel i5, i-8 GB ye-RAM ne-128 GB yokugcina singayithola ku-Amazon kuphela I-822,95 euro.
Ideskithophu I-HP OMEN Obelisk nge-Intel Core i5 processor, i-16 GB ye-RAM, i-1 TB HHD ne-256 GB SSD, ihluzo ze-GTX 1060 ngaphandle kohlelo lokusebenza I-879 euro.
ephathekayo I-Lenovo Idepad engu-15,6-intshi, ne-Intel Core i7 processor ene-8 GB ye-RAM, i-256 GB SSD, ihluzo elihlanganiswe yi- I-499 euro.
ephathekayo 14-intshi HP Pavilion, Intel Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD, enehluzo ezihlanganisiwe ezine Windows 10 nge I-649 euro.
Abaqaphi bekhompyutha nezinsiza
I-Logitech G933 I-Artemis Spectrum enomsindo ozungezile ongu-7.1 ngo I-89,90 euro.
Ukuqapha kwe-Samsung okungama-intshi angu-34Ukulungiswa kwe-QHD, i-100 Hz, i-21: i-9 ratio yesilinganiso ngasinye I-599,99 euro.
Ukuqapha okungama-intshi angama-27 intshi, Ukulungiswa okuphelele kwe-HD, i-HDMI ne-Displayport egobile ngo- I-149,99 euro.
Umqapha wokudlala weBenQ 24,5-intshi, Ukulungiswa okuphelele kwe-HD, i-HDMI, i-DVI ne-VGA nge I-109,99 euro.
Ukuqapha kwe-AOC okungama-intshi angu-21,5 ngokulungiswa okugcwele kwe-HD, ukuxhumeka kwe-HDMI nge I-67,99 euro.
23,8 Inch Lenovo Monitor ngokulungiswa okugcwele kwe-HD, ukuxhumeka kwe-VGA ne-HDMI nge I-87,99 euro.
Ikhibhodi yokudlala yeCorsair, I-RGB ibuyiselwe emuva, nomphumela wokulwa nesipoki, ngokhiye we-Windows yokukhiya nokuthambekiswa okuguqukayo nge 59,90 I-49,90 euro.
Ikhibhodi yeLogitech negundane okungenantambo ngu I-39,99 euro.
Igundane leRazer Basilisk ngentambo, inzwa ebonakalayo ye-16000 dpi futhi ifaka ukudayela okuvumela ukulungisa ukumelana kwesondo lokuhambisa. Itholakalela i- I-49,99 euro.
I-Logitech MX Master Mouse, elinye lamakhibhodi ahamba phambili emakethe esizukulwaneni sawo sokuqala liyatholakala I-42,99 euro.
Iphedi yegundane le-HyperX I-90 × 32 cm ilungele ukucacisa okuphezulu negundane lethu. Itholakalela i- I-28,90 euro.
Ukuthwebula ividiyo ngokusakazwa I-Razer Ripsaw HD itholakalela i- 109,99 I-99,99 euro. Intengo yayo ejwayelekile ngama-euro angu-129,99.
INetgear R6700 Router itholakalela i- I-99,90 euro.
I-Apple Watch Series 4, enye yama-smarwatches amahle kakhulu emakethe namuhla, esizukulwaneni sayo sangaphambilini kuya kwesamanje, iyatholakala Uhlobo lwama-40 mm por I-339 euro.
El Uchungechunge lwe-Apple 4 kuhlobo lwe-44mm iyatholakala nge- I-369 euro.
I-Samsung Galaxy Watch Active, ngemibala ehlukene bese uqeda ngo I-199 euro.
I-Samsung Galaxy Watch, 46mm, enesikrini esingu-1,3-inch, i-4GB yesitoreji, i-GPS eyakhelwe ngaphakathi ne-waterproof iyatholakala I-232 euro.
Samsung Gear Ezemidlalo, ekahle yokulinganisa umsebenzi wethu wezemidlalo iyatholakala ku-Amazon ye I-149 euro.
Imikhiqizo yokuzenzakalela kwasekhaya nasekhaya
IPhilips Hue White & Umbala we-LED Strip iyahambisana nabo bonke abasizi bezimakethe ngo I-79,95 euro.
I-Osram smart bulb, enesokhethi ye-E27 ye- I-24,94 euro.
I-Yeelight ngu-Xiaomi, Isibani sombala esingu-9W namalambu angama-600 ngakunye I-23,56 euro.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amazon » Amadili amahle kakhulu we-Black Friday 2019 ku-Amazon
Isaphulelo sika-10% kuma-drones nakwizesekeli ze-Black Friday